LINE ESIDE yama
DC amasosha omzimba cores
DC amasosha omzimba Composite Cores
DC amasosha omzimba cores olulodwa
High zamanje imodi evamile ukuphazamiseka isihlungi core
Nanocrystalline Cores ngoba transformer yamanje
Nanocrystalline Cores ngoba Ukuvuza Circuit Breakers
Nanocrystalline Cores ngoba Amandla transformer
ipharamitha eziyisisekelo ribbon1K101
ipharamitha eziyisisekelo ribbon1K107
Ingabe imikhiqizo yakho imvelo?
Yebo, imikhiqizo yethu cores kukhona imvelo futhi ube isitifiketi SGS, Indaba yokuqala thina usebenzisa like epoxy enamathela impahla kanye izimo has RoHS futhi UL isitifiketi kakhulu.
Mayelana ekhethekile usayizi cores, uma ngabe unganikeza.
Yebo, uma usayizi yakho ekhethekile, singenza ngawe too.we ungase ucabangele icala evulekile mold.we babe icala ukukhiqiza, bangakwazi ukuvula isikhunta ngaphakathi 2 week.So akusiyo inkinga.
Mayelana iphrojekthi entsha futhi ukusebenza kakhulu, ungakwazi yini ukunikeza?
Mayelana iphrojekthi entsha, sizobe ukusekela customer.we ungenza ukuhlolwa futhi ukukhiqiza amasampula ukuze approval.we yakho bayakujabulela ukuthola iphrojekthi entsha futhi request.It entsha kuyasiza nakithi.
Uma izinga umkhiqizo akuyona isicelo sethu, indlela yokwenza?
Okokuqala, siyogwema lokhu thing.we uzokwenza amasampula phambi batch production.After amakhasimende ethu approval.we uzoqala production.So izinga uzohlangana customer.As ngenxa ukusebenza umkhiqizo wethu lokungafani, siyoba nawo wonke ukulahlekelwa yekhasimende.
Mayelana iphakethe, sizokwenza isiqiniseko kuphephile ngendiza noma ulwandle shipping.Our ukuhweba yokuthengisa has eminyakeni engaphezu kuka 5 nakho e export.So wena ungakhathazeki mayelana package.On evamile, sizosebenzisa Pallet yezimpahla Protect.
Dry Uhlobo transformer , Nanocrystalline Cores Ukuze transformer yamanje , Iron- Ezisekelwe amorphous Ribbon , Fe Ezisekelwe amorphous Ribbon , Emc Core, Nanocrystalline Core ,